Ra’iisul Wasaare Rooble oo weerar dadban ku qaaday MW Farmaajo | Warbaahinta Ayaamaha
Ra’iisul Wasaare Rooble oo weerar dadban ku qaaday MW Farmaajo
MUQDISHO-AYAAMAHA-Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay in xaaladda cakiran ee dalka Soomaaliya kaliya looga gudbi karo in dalka ay ka dhacdo doorasho heshiis lagu yahay.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi kudaray in is jiidjiidka doorashada ay sababeen hoos u dhac ku yimid Ganacsiga dalka, wuxuuna sicad u sheegay in doorashada kadib waxkasta ay sidooda kusoo laaban doonaan.
Maxamed Xuseen Rooble Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in ka xukuumad ahaan ay ka go’an tahay in dalka doorasho ka dhacdo, sidoo kalena ay jiraan dad doonaya inay doorashada hakiyaan oo qorsho kale ka dhex raadinaya.
Sidookale kooxda Farmaajo ayaa ka careysan in doorashada xildhibaanada reer waqooyiga aysan noqon sidii ay doonayeen oo ay kusoo baxayaan xubno badan oo aan taabacsaneyn.
Hadalkan kasoo yeeray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa kusoo aadaya xilli dhowr jeer ay dib u dhacday doorashada welina aan go’aan laga gaarin waqtiga ay dhamaaneyso.